စင်ကာပူ က မြန်မာမိန်းကလေးတွေ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မြန်မာ ဆိုတာ သတိထားကြပါဦး ~ Myanmar Express
စင်ကာပူ က မြန်မာမိန်းကလေးတွေ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မြန်မာ ဆိုတာ သတိထားကြပါဦး
From : ဒေါက်တာဆင်ပေါက်ကမ္ဘာပေါ်မှာ မြန်မာမိန်းကလေးဖြစ်ရတာကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီး အများစုက မိန်းကလေးများက ဂုဏ်ယူကြပါတယ်။"ယောကျာ်းတုိ့ဘုန်းလက်ရုံး မိန်းမတို့ဘုန်း ဆံထုံး" ဆိုသည့် စကားအတိုင်း ရှေးခေတ်မြန်မာမိန်းကလေး များဟာ ဆံထုံးလေးများဖြင့် မြင်တွေ့ရသည်မှာ ရင်သပ်ရူမောဖွယ်ရာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမူကို မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားတဲ့ မိန်းကလေးတွေ များစွာလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။အခုမှာတော့ မြန်မာပြည်သူ/သားတွေ အထင်ကြီးလေးစားရပါသည်ဆိုသော အမေစု(ခ)ဒေါ်ညုကြောင့် အရင်ကတန်ဖိုးထားကာထိန်းသိမ်းလာသော အရာများ ပျောက်ပျက်လာတာကို များစွာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။နိုင်ငံခြားသားကို ဘာလို့လက်ထပ်လဲ အမေစုတောင် နိုင်ငံခြားသားကို လက်ထပ်ပေါင်းသင်းတာလေ သမီးတို့လည်း ယူမှာပေါ့ ဆိုပြီး ဖြစ်လာကုန်ပြီ။မြေမျိုလို့ လူမျိုးမပြုန်း၊လူမျိုမှ လူမျိုးပြုန်းမယ် ဆိုတာ ကို မြန်မာမိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ လုံးဝ မမေ့သင့်ပါဘူး။အမေစုဆိုတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့လမ်းပြဦးဆောင်ကောင်းမူကြောင့် ပြည်ပမှာ လန်ထွက်နေတဲ့ ရွှေမြန်မာ မမများ Myanmar Express Posted in: ဆင်ခြင်စရာ,ပေးစာ
26 May 2012 12:47
ဟိုမမ ပြောတဲ့ စကပ်တိုတိုဝပ်ပြီး အဆင့်ဆင့်ရှိရှိဖေါ်တာ ..ဒါမျိုးလားမသိဘူး .. မစာဘူးတာတွေစား မသောက်ဘူးတဲ့ဈေးကြီးအရက်သောက် .. ဈေးကြီးတဲ့ ကွန်ဒုးံသုးံတာပေါ့ .. ဆောက်ဆင့်မြင့်တဲ့ေ-ာက်ပတ်တွေပေါ့အဆင့်ရှိရှိ နောက်ဆုးံပေါ် အေအိုင်ဒီအက် ရောဂါနဲ့ သေကျပေါ့
whay it's very sure is that your standards are lower than them.
Hey guys ..actually they are from Myanmar and they don't know city life and they never seen before .so they just give their pussy and enjoy. Somemore they look down their own native town and nation guys ,they are so proud because they never been to Singapore before .they are away from their family and freely can go with any guys any time and any where ..did u want that kind of girl for your life to marrid ? Some they watch blue movies .gather with their friend .,They act like Singapore girl or European girl..So funny right ,,they have fuck by many guys ..,they cheat to their real boy friend from Myanmar , so many stories man !! Of course some of 10% girl from Myanmar are good girl ,
26 May 2012 22:57
not blue movies.porn movies.
27 May 2012 19:52
သူများနိူင်ငံမှာ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ဆိုပြီး ရေးထားတာက ..... ကိုယ့်နိူင်ငံမှာ အဲ့လို ဖြစ်တဲ့နေရာတွေ သူတို့ ကိုယ်တိုင် ရောက်ဖူးရက်နဲ့ ရေးတတ်သေးတယ် ဘလော့ ရေးတဲ့ သူကလဲ တော်ပါ့ မြန်မာနိူင်ငံက နေရာတစ်ချို့မှာအဲ့ထက် လန်းတဲ့နေရာတွေ မင်းကိုယ်တိုင် ရောက်ဖူးမှာပါ ရေးချင်ရင် ကွင်းဆင်းလေ့လာပီး ရေးပေါ့ ကိုယ့်ကင်မရာနဲ့ ကိုယ်ရိုက်ပေါ့ကွာ.
ဒီနှစ်Thingyan တောင်တော်တော်လေဆိုးတယ်ရန်ကုန် မန်လေး အကုန်လုံး ခြောက်လက်မဂျင်း အဲ့တာထက်မရှည်ဘူးကြည့်ရတာမိန်းမချင်းတောင်မကြည့်၇ဲဘူး
1 June 2012 14:50
အမေစုနဲ့မဆိုင်ဘူးဗျ...ဘာလို့နိုင်ငံခြားကိုထွက်ရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို အရင်စုံစမ်း...အရေးကြီးတာက မိမိကိုယ်တန်ဖိုးထားဘို့က အဓိကပါဗျာ...
2 June 2012 03:12
@Ye Tike....if you want to insult someone, make sure you write in grammatical format. You, yourself look at the mirror and you will see that your standard is lower than Bitch. Pls dont write something that you look with your two disgusting eyes. You look at your comment. Even not one sentence, you write it correctly. Suchashame man. You are SUCK. And your attitude is thumb down.
5 June 2012 23:56
အဲဒီလိုဖော်နေကြတဲ့ စပ်စလူးနတ်ပူး အမျိုးဖျက်မတွေက ဘယ်သူတွေနဲ့ပတ်သက်နေသလဲဆိုတာ အရင်စုံစမ်းကြည့်လိုက်ပါဦး။
ပုံ ထဲ က မိန်း မ တွေ က စောက် ရှက် မှ မ ရှိ ကြ တော့ တာ လေ အဲ ဒါ တွေ ကို လိုက် ပြော နေ လဲ ဘာ မှ ထူး လာ မှာ မ ဟုတ် တဲ့အ တွက် မ ပြော တာ ပဲ ကောင်း တယ် ပြော ပြန် ရင် လဲ ပြော တဲ့ သူ ပဲ ရိုင်း သ လို လို နဲ့ ဖြစ် မှ ပဲ သိ မှာ မ ဖြစ် ရင် တော့ သိ သေး မှာ မ ဟုတ် ဘူး
6 June 2012 16:42
ကဲသူတို့ကို ဘယ်လိုဆုံးမ မလဲအန်တီ..
ေ ကာင်မတွေည ည်း တို့  စ က င်္ာပူမှပဲေ န မ လို့  လား ဒီက ဒုတ်ေ တွလဲထွားပါတ ယ်... ။
al lound htee sakat ko artoe ma wear tai boo sountarshat ma shi boo lrr????
bamar ma tway kalar lee nel tway chin lo nay mha pop
Wine (made in Myanmar)
13 June 2012 02:57
It's not concerned with Daw Aung Sann Su Kyi, the leader in Burma as most of the people accepted because she can't control everyone inside the country or outside the country. It's just depended on the person. This is how they are. Burmese people are kind of superstitious and they just want to order. IT IS WRONG. I also don't like these kind of girls. Girls should be shy and should show up what they've got. We can concluded these girls as SHAMELESS. But it is what they are. It's not concerned with Daw Su and even with their parents. They are adult and they should know what should they do or not, what's suitable or not and what's right and what is wrong.
14 June 2012 20:22
မရိုင်းပါနဲ့။ဘယ်သူတွေဘယ်လိုပဲပျက်ပျက် ကိုယ့်အိမ်ကအမျိုးတွေမပျက်ရင်ပြီးတာပဲ။သူများတွေကိုမပြောခင် ရှင်တို့အိမ်မှာ ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်က အဲ့လိုမ၀တ်ဘူးလဲလို့............သူများမျက်ချေးပဲမမြင်ပါနဲ့။
15 June 2012 18:40
မြန် မာ အ မျိုး သ မီး များ တ အား ရိုင်း တယ်
သူတို့ ဟာနဲ့သူတို့ ခံတာဘဲ ခံပါစေ
16 June 2012 13:18
ကြုက် သ လို နေ ကြ ကိုယ်.အ မျိုး တ ယောက် မှ မ ပါ ဘူးယားနေ ကြ တာ ကိုး
16 June 2012 20:43
ae louk lann tar ko pyaw lite kya tar.....thu toe ba thar thu toe lote tar lay...ko naeanay gyi pal... :P
16 June 2012 22:50
ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ ပုံလေးတွေက မိတယ် နောင်ဆိုဒါတွေဘဲ တင်ပေးနော် ကျေးဇူး
19 June 2012 19:57
မဆိုင်းတဲ့ သူကို မလွဲချပါနဲ့ ကိုယ်ပါကိုယ် အရှက်မရှိတာ
20 June 2012 18:03
ကို ယ် ဘာ သာ ကိုယ် ပျက် စီး နေ သော မိန်း က လေး များ အ တွ က် မ ဆို င် သူကို ဆွဲ မ ထ ည့် သ င့် ပါ
အဲ့ဒါ မြန်မာ ငါတို့ မြန်မာ... ဆိုပြီးကြွေးကြော် ရမှာလား။ အာဇာနည် သီချင်းလို ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း အပြစ်မတင်ရက် တော့ပါ။
ဒေါ်စုက ငါ့အမျိုးလဲမဟုတ်ဘူး သူနဲ့လဲဘာမှမပါတ်သက်ဘူး ဒါပေမယ့် မင်းတို့ရေးတဲ့ စရေးတာကမှားနေတယ် ဒေါ်စုမရှိခင်ကတည်းက ပျက်နေတဲ့မြန်မာမိန်းကလေးတွေတစ်ပုံကြီးပါ အခုမှ သူများကိုလွဲချတာမကောင်းပါဘူး မင်းတို့နားလည်ရမှာက အကျင့်ကောင်းရင် စာရိတ္တကောင်းပါတယ် ဒီနှစ်ခုလုံးမကောင်းတဲ့သူ အတွက်လွဲမှားစွာမရေးသင့်ပါဘူး ဒေါ်စုက ဒီလိုဝတ် ဒီနေလိုနေလို့ မသင်ပေးခဲ့ပါဘူး ဒါကိုလူတိုင်းသိပါတယ် မင်းတို့မသိတာကတော့ ရေးတဲ့သူက ဆွံအနားမကြားဖြစ်နေသလားမသိဘူး လူစားထိုး အလုပ်ပြောင်းပေးလိုက်ပါ နဂိုကတည်းက ပျက်ချင်နေတာ စက်ပြင်သမားတစ်ယောက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး ဆိုတာသိထားပေးပါတစ်ခြားမြန်မာမိန်းကလေးများနှင့်မဆိုင်ပါ ကောင်းသူကကောင်းသူ ဆိုးသူကဆိုးသူပေါ့ ကိုယ်ကြောင့် သူများအပြစ်မဖြစ်ပါစေနှင့်
ဟုတ်ပါတယ် အကိုပြောတာ မှန်ပါတယ်။
27 June 2012 01:16
(မြန် မာ အ မျိုး သ မီး များ တ အား ရိုင်း တယ်)လို့ ရေး ထား တဲ့ လူ ခင် ဗျား အ မေ က မြန် မာ မ ဟုတ် ဘူး လားခင် ဗျား က မှ ပို မိုက် ရိုင်း တာ
30 June 2012 13:43
naing gan jar ko yout yin topdlo bal lote kyart mar bal.
1 July 2012 14:57
1 July 2012 16:44
ဘာမှတော့မဆိုင်ဘူး...အမေစုနဲ့ ....ဟိုလူပြောသလို...ကျူပ်အမျိုးလဲမဟုတ်ဘူး...အမေစုက.....နဂိုကတည်းကပျက်ချင်တဲ့လူကပျက်မှာ....မပျက်ဖဲကောင်းနေတဲ့ သူတွေတစ်ပုံကြီး....ရှိတယ်....ဘယ်အရာကိုမဆိုအဆိုးမြင်မျက်လုံးနဲ့ ပဲကြည့် နေတော့....ဘာတွေလုပ်လုပ်မင်းတို့အမြင်မှာဆိုးနေမှာပေါ့..မဟုတ်ဘူးလား..ကျူပ်တာတာမှားလား..........
2 July 2012 21:23
Hi myanmar express you take care your baby and your sister, never let it be like this.
3 July 2012 14:12
I suggest the people who posted this subject and comments to open their eyes & ears and looking around within the country(In side Myanmar). Don't simply put u r urgly note on this. Most of the general's family members are worse them above posted. Let's look inside the country first.
3 July 2012 14:40
စင်္ကာပူမှ မိန်းကလေးများဆို ပြီးဝါးလုံးရှည် ဖြင်.မရမ်းစေချင်ပါ..ရိုးသားစွာ ဖြင့်ရ သမျှခြစ် ကုတ် ပြီးမိဘ မောင်နှမကို လုပ်ကျွေးနေသူ တွေ များစွာရှိပါသည်.... သေချာစွာလေ.လာပြီးမှ ရေးစေချင်ပါသည်။
5 July 2012 04:56
He is left,not right
7 July 2012 09:42
I agree with Mc MyoSet
8 July 2012 11:42
ရှေ့ကနွားမ ဒေါ်စုက လမ်းပြခဲ့တော့ အခု မိန်းခလေးတွေက အဲအတ်ိုင်းသွားတာပေါ့
ငါလဲနဲနဲ ဆက်လိုက်ဦးမယ် . အဝေးကမီးကို နောက်မှငြှိမ်းပြည်တွင်းကို အရင်ကြည့် နိုင်ငံတော် လူကြီးတွေက ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်းတွေ ပေါပေါ လွှင့်၊ ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးမိန်းကလေးတွေက ဖေါ်နိုင်သမျှဖေါ်ကြ ကောင်းလေးတွေက အ၀တ်အစား ဆံပင်တွေ မသေမသပ်လုပ်ကြနိုင်ငံတော်အရေး ဝေလာဝေး ကိုယ့်ဘ၀အတွက်တောင်ကိုယ့်မသိ အားကိုးချင်စရာ အချောက်ကလေးတွေအလား၁.နိုင်ငံရေး ၂.အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှု ဒါတွေထားဦး ကိုယ့်ဘ၀ ကိုယ်ကောင်းအောင် လုပ်နိုင်ဖို့ ကျန်းမာကြံ့ ခိုင်တဲ့ အားသစ်လောင်းလူငယ်တွေဖြစ်ဖို့ ကိုရီးယာုးုရုပ်သံစီးရီး တွေကို အရင် တားဆီးကြည့်ကြရင် အဖြေ ထွက်နိုင် မလား ဒီနေရာမှာ ဦးနှောက်များများနဲ့ ၀ိုင်းစဉ်းစား ကြပါဦးစို့
12 July 2012 16:42
They are in Rome, is it any problem they do as Roman do?. Unnecessarily make the mountain out of the molehill
mr.myanmarexpress.. dar dwe ka bamar larr ? kalarr larr ? baythuu tharr thamee, nyima lay ?dar myo bayy larr ? rakhine yinkyayy hmuu ?rakhine yinkyayy dai sor ? kalarr yinkyayy hmuunek rakhine yinkyayy hmuu hnaingg chin kyii paww naw.. remark; ( goddama myat swar phayarr ko soawkarr thu di muslim yanthuu phyit di.bar kyaungg layy ? sor daww goddama myat swar phayarr ka kalarr phyiin par kyaungg khinmyarr ; from, mg hla soe ( canada )
16 August 2012 10:05
အပေါ်ကောမက်တွေကိုဖတ်ရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးကိုယ့် မြန်မာ့အချင်းချင်းတွေစည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ဖြစ်စေချင်ပါသည်။ဖြစ်လာသမျှတွေကိုတာဝန်းမဲ့စကားမပြောကြပါနဲ့ လားပြိးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ တိုင်းပြည်က ဆက်ပြီးတော့မြန်မာအဖြစ်ရပ်တည်နေချင်တယ်ဆိုရင်စည်းလုံးကြရအောင်ပါဖြစ်လာသမျှကိတ်စရပ်အားလုံးကိုလည်းဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းကြရအောင်ပါအနာဂါတ်အတွက်နဲ့ ဖြတ်သန်းရမှာကြောက်လို့ ပါအစ်ကိုအစ်မတို့ရဲ့ ကောမက်တွေကိုဖတ်ပြီးတော့ နောင်လာမည့် ညီငယ်ညီမငယ်တွေအတွက်မကောင်းပါဘူးညိမလေးလဲကောက်မက်တွေကိုဖတ်ပြီးအကြောင်းအရာတွေကိုတွေ့ ရတော့အားငယ်မိတယ်ငါတို့ အတွက်ရှေ့ ကအစ်ကိုအစ်မတွေကအဲ့ လိုတွေဖြစ်နေကြပါလားဆိုပြီးတော့ပေါ့ ကျေးဇူးပြုပြီးစည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ညီညွတ်ပေးကြပါလားနယ်မှညီမလေးတစ်ယောက်အနူးအညွတ်တောင်းဆိုပါတယ်နော်
20 August 2012 08:48
စိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက် တခုအနေနဲ့ရှာကြတယ် နားလည်ပေးလို့ရတယ် ဒါပေမဲ့ ဘုရား တရား သံဃာ မိဘ ဆရာကိုတော့ မမေ့နဲ့ မမေ့ရင်ပြုပြင် ပြောင်းလဲလို့ရတယ်
ခင်ဗျာတို့ နိုင်ငံခြားကိုအထင်ကြီးတာကိုဗျ။နိုင်ငံခြားသွားပြီးခွေးဖြစ်နေတဲ့သူတွေအများကြီး ခင်များတို့က ကိုယ့်လူမျိုးဂုဏ်ကိုမှမသိကြတဲ့သူတွေ ဗိုလ်ချုပ်ပြောသလို ခင်ဗျားတို့ ( ) ဖြစ်နေကြပြီဗျသိကြသေးရဲ့လား မမ တွေရဲ့
Are they your relationships?
8 September 2012 15:26
မိန်းကလေးတိုင်း မပာုတ်ပါဘူး၊အကုန်လုံး သိမ်းကျုံးမပြောနဲ့။
11 September 2012 20:45
်ကိုယ် ကောင်း ရင် ခေါင်း ဘယ် မှ မရွေ့ ပါဘူး လောက မှာ အကောင်း အဆိုး ဒွန်တွဲ နေတာ ကို ကောင်းတာ ကြည့် ရင် ကောင်း တာ မြင် မယ် ၊ မကောင်း တာ ကြည့်ရင် မကောင်းတာ မြင်မယ် ကိုယ် ဘာ ကို ကြည့် နေ တာ လည်း ဆိုတာ ကို ပြန်ကြည့် လိုက်ပါ အုံး လူ ဆိုတာ ဒါပါ ပဲ Anonymous
I don't actually know who you are but you look impress yourself much. If you wanna to guide someone, you should check your grammar first! Anonymous
ဘာပြောပြော မြန်မာမိန်းကလေးတွေဆိုတာ မြန်မာဆန်တာပဲကောင်းတယ်နိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာတွေမှာမြန်မာ့ဂုဏ်ကို တင့်တယ်စေခဲ့သူတွေအများကြီးပါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မြန်မာ ဆိုတာသာသတိရပါ
ဒေါ်စု ဆို တာ မျိုး ဂုဏ် ကို မ ထိန်း ။ အာ ဏာ ရုး ။သာ ပေါင်း ညာ စား ။ ဘာ သာ တ ရား မ လေး စား တဲှီ့ဗိုလ် ချူပ် မျက် နှာ အိုး မည်း သုတ် နေ တဲ့ ဖော ရွှီး တ ဏှာ မ ကြီး လို့ ပဲ မြင် မိ တယ် ဗျ ။ ကျွန် တော် နဲ့ fri တွေ ၁၉၈၈ နောက် ပိုင်း မွေး ဖွား လာ တဲ့ မြန် မာ့ လက် သစ် လူ ငယ် တွေ မှာ တော့ ဒေါ် စု လို့ မ မြင် မိ ပါ ဘူး ဒေါ် စူ လို့ ပဲ မြင် မိ တယ် နေ ရာ တ ကာ မှာ ကြုံ သ လို စူ အောင် လိုက် လိုက် လုပ် နေ လို့ ဟား ဟား ....ထပ် ပြော ရ ရင် ဒေါ် စု ဆို တာ မြန် မာ လူ အို endateသေ မ ထူး နေ မ ထူး တွေ ရဲ့ အိမ် မက် မှာ ပဲ ရှိ ပါ တော့ တယ် ဗျာ ။ နောင် ငါ တို့ ရဲ့ လာ မယ့် ၁၀ နှစ်စာ လောက် ရဲ့ က မ္ဘာ သစ် . နိုင် ငံ သစ် မှာ ဒေါ် စု နေ ရာ တ နေ ရာ ရ အောင် စူ စူ ပူ ပူ လိုက် လုပ် ဖို့ စီ စဉ် ထား ပါ လို့ .... ကျေး ဇူး ပဲ ဗျာ နဲနဲ လောက် ရင် ဖွင့် လိုက် ရ လို့ sethuaung
10 October 2012 21:51
သာဓုပါတော့် သာဓု သာဓု
I saw this guys called ye tike who wrote fucking post by using sucking English. Anonymous
အဓိက အကြောငိးရင်းကတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံက လူကြီးတွေမကောင်းလို့ ဒီလိုဖြစ်နေကြတာပါ။ ဒီဝတ်စား ဆင်ယင်မှူတွေက နိုင်ငံတော်တီဗီက ထုတ်လွင့် နေတဲ့ ကိုးရီးယားကားတွေ ကြည့်ရင်း ကြည့်ရင်းနဲ့ တဖြေးဖြေး ၀တ်ရဲလာကြတာပါ ။နောက်ပီးတော့ မြည်မပြည်က အနုပညာရှင် လို့ဆိုပြီးတော့ တစ်ချို့သော ဖာသယ်မ သာသာ သရုပ်ဆောင်မတွေကို အတုခိုးပြီး ၀တ်နေကြတာပါ။ နောက်ပီးတော့ စင်္ကပူရောက်တဲ့ အမျိုးသမီးတိုင်း ဒီလိုမဟုတ်ပါ ။ အစကတဲ့က ဖာသယ်မ စိတ်ရှိတဲ့ ဖာသယ်မလေးတွေပဲ ဒိလိုနေကြတာပါ ။ အကုန်ဆွဲမထည့်ပါနဲ့။ ဒေါ်စုတောင် ကုလားမယား လုပ်သေးတာပဲ ။ သူစီးတဲ့ကားတောင် ကုလားကိုပဲ မောင်းခိုင်းတာ မယုံရင် သူအမေရိကန်က ပြန်လာတုန်းက သွားကြိုတဲ့သူစီးတဲ့ကားကိုပြန်ကြည့်ပါ။ သူနဲ့ ကြိတ်ပုန်းခုတ်နေတဲ့ ကလားလားမသိဘူး။
တကယ်ကို ကုန်ပါပြီဗျာ မြန်မာမလေးတွေဟာပြတိုက်မှာသာ တွေ့နိုင်တော့မယ်။ ကုန်းဘောင်နန်းတည် မင်းတရားကြီးများ မြင်စေချင်စမ်းပါဘိ။ ကယ်တော်မူကြပါ။ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှူ.ဟာ နေညိုချိန်ကိုရောက်နေပါပြီ။ Anonymous
29 November 2012 18:50
7 December 2012 12:11
မှန်တယ် အိုကေ ကောင်းတယ်အဲ့လိုရေးတာ
14 December 2012 00:19
အာဏာရှိသူ ငွေကြေးချမ်းသာသူ လူသားအကျိူး ပိုပြီးလုပ်နိင်မှာပါ။ဂျပန်သူဌေးဆီမှာ၂နှစ်အလုပ်မလုပ်ရဘဲလခယူနေရတာကြာတော့ရှက်လါတယ် တစ်နေ့မှာသူဌေးလါတဲ့အခါ ကျွန်တော်ကအလုပ်ထွက်တော့မယ်ပြောတော့ ဘာကြောင့်လဲမေးတယ် ကုမ္မဏီက၀င်ငွေမရှိလို့ ငါလခယူရတာ ရှက်လါလို့ပါပြောတော့ (ဘက)အရှုးသန့်ရှင်းရေးဘဲလုပ်ကွာဆိုပြီး ဆူသွားခဲ့ပါတယ် တစ်နေ့ကုမ္မဏီဘောနက်(စ်)ပေးတဲ့နေ့ ဘိုးလိန်းကစားရုံမှာရှယ်ယာသူဌေးတွေ စုထိုင်နေရာက ကျွန်တော့်ကိုလှမ်းခေါ်ပြီး မင်းတို့(ဘိရုမာ)ဗမာရဲ့စိက်ဓါတ်တွေ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းသလို ငါတို့(နီဟွန်းဂျင်း)ဂျပန်လူမျိုးတွေ အကြောင်းလဲပြောပြမယ်နော်ဆိုပြီး ငါတို့ကုမ္မဏီလွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်ကြော် (ဥပမာ)တစ်နေ့ကို တစ်သန်းမြတ်ခဲ့တယ် ၁၀နှစ်- ယနေ့တစ်နေ့ကိုတစ်သိန်းရှုံးတာ၂နှစ် အဲဒီလိုရှုံးတာကိုကြည့်ပြီး ကုမ္မဏီကိုပိတ်လိုက်ရင် အလုပ်သမားထောင်ပေါင်းများစွာ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့တဲ့လေ။ ၂၀၀၄ခုနှစ် ကျွန်တော်ပြန်ရောက်လါပြီး လူသားအကျိူးပြုရန်မီးကုန်ရမ်းကုန် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့……..နိုင်ငံရေးငါမသိဘူးကွာ တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့အတွက်အတ္တမရှိဘဲ တကယ့်လက်တွေ့လုပ်နေသူတွေ ပေါင်းပြီးတည်ဆောက်ကြပါ၊ (ဥပမာ)ယခင်က(ပင်လုံစာချုပ်မှလွတ်လပ်ရေး၊လွတ်လပ်ရေးမှပါတီစုံ)ယခု(လက်တွေ့လုပ်နေသူတွေပေါင်းမှဒီမိုကရေစီ၊ဒီမိုကရေစီမှပါတီစုံ) အားလုံးနည်းနည်းလေးမှားနေသလိုဘဲနော်။ဘာသာတရားဆိုတာ ယုံကြည်ချက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အတွက် မျက်လုံးမှိတ်ပြီးမကိုးကွယ်ပါနဲ့ ဘာသာပြောင်းတိုင်းလူမျိုးမပြောင်းနိုင်ပါ။အရီးကြီးခေတ်ဆိုတာ ရှိခဲ့တဲ့အတွက် ငါကိုယ်တိုင်မျိုးမစစ်ပေမဲ့ လူစစ်ဖို့ လူပီသဖို့တော့လိုတယ် အမြဲဆန်းစစ်နေတယ်ကွာ၊တို့ကတာဝန်အရဆိုတဲ့စကား မင်းမိသားစုအတွက်ပါ တိုင်းပြည်အတွက် မဟုက်ပါဘူး ပြန်ဆန်းစစ်ပါအုံးကွာ။ မင်းကောလူသားတွေအတွက် သွားကြားထိုးတံ တန်ဘိုးလောက် လုပ်ပြီးပြီလါး၊ တိုင်းပြည်ဖျက်မဲ့ ငါကဘာကောင် ဘာရာထူးကွ ငါကခေါင်းဆောင်ကွ ဆိုတဲ့ဝေလေလေစုန်းပြူးတွေဖယ်ရှားပြီး လက်တွဲကြပါ၊ကောလဟာလနဲ့ အာချောင်မယ်ဆို ဝေးဝေးနေပေးပါ၊မင်းကတကယ်ဘဲ တာဝန်အရဘဲဖြစ်ဖြစ် မျိုးချစ်စိက်နဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ် တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ လုပ်မယ်ဆိုရင်(ရှေ့ကသွားရင်အီးမပေါက်နဲ့ နောက်ကလိုက်ရင် ဖိနပ်မနင်းနဲ့ကွာ အရမ်းစိက်ဆိုးတယ်) ငါတို့နိင်ငံက ကမ္ဘာမှာအရမ်းနောက်ကြနေပြီ အချိန်မရှိပါ။လူသားအကျိူးပြုဂီတဥယျာဉ် (၀၉၅၀ ၈၂၈၀၈) တာမွေလူမိုက်ကြီး ၀င်းကိုလှိုင် JJ (CLUB) နားမှာနေတယ်………http://www.facebook.com/media/set/?set=a.482823941733642.110392329.100000181218020&type=3&
14 February 2013 00:51
14 February 2013 10:38
အားလုံးအတူတူပဲ မင်းအမျိးတွေလဲဒီ အတိုင်းပဲမင်းအမျိးတွေလဲ ဒီအတိုင်းပဲ
2 March 2013 17:52
ဟွန်. စိတ်ရှုပ် စရာတွေ ကြီးပဲဒီမိုကတေစီကို လက်ခံစမ်းပါ
22 March 2013 10:03
ဒေါ်စုကို ပြောရအောင် မင်းကဘာကောင် မို့လဲ
23 March 2013 15:17
23 March 2013 23:25
မင်းတို့ အားလုံး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်သတ်မနေကြနဲ့ ငါပြောမယ် အားလုံးနားထောင် နော် လီးပဲ စင်ကာပူကကောင်မတွေလဲ အနေအထိုင်မတက်ဘူး လီးပဲနောက်ဆုံးပြောခဲ့မယ် မင်းတို့အမေဆုလဲ လီးပဲ
ပြောတာတွေကရယ်စတွေချည်းပါပဲလားဟား ဟား ဟား အားအား ယားယား
မိန် မ ဘ ဝ ကို တန် ဖိုး ပါ တ ချိန် မှာ မိ ခင် တ ယောက်ဖြစ် လာ ခဲ့ ရင် ကိုယ့် ရဲ့ အ ရိပ် က သား သ မီး အ တွက်ထီး လို အေး မြ တဲ့ အ ရိပ် ဖြစ် စေ ပြီး မီး လို မ ပူ စေ သင့် ဘူး လေ ဒါ ကြောင့် မြန် မာ မ်ိန်း ခ လေး ဘ ဝ ကို တန် ဖိုး ထား လေး စား ပြီး နိုင် ငံ့ ဂုဏ် အ မျိုး ဂုဏ် ကိုထ်ိန်း သ်ိမ်း သင့် ပါ တယ်
ko min aung ko min aung
18 April 2013 00:15
အ မေ စု နဲ့ ဘာ မှ မ ဆိုင် ဘူး
18 April 2013 20:35
အား လုံး တော် တန် တိတ် ကြ တော့ ကွာ အ မေ စု နဲ့ ဆိုင် တယ် မ ဆိုင် တယ် ဆို တာ မင်း တို့ ကိစ္စ မ ဟုတ် ဘူး
19 April 2013 19:11
22 April 2013 20:35
ဘယ်သူနဲ့မှ မဆိုင်ဘူး သမီးတကောင် နွားတထောင် တဲ့ က မြင်းပြိပေါ့ ဇောင်းကလွတ်လိုက်တဲ့ မြင်းလိုဘဲ
28 April 2013 09:31
အဓိက ကမိမိအပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်.အမေစု ကိုဆွဲမထည့်နဲ့.သူတို့ပါသူတို့ ဖော်ချွတ်ကြတာဒေါ်စုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး.ဒေါ်စှကသူချစ်တဲ့သူကိုယူတာဘာဖြစ်လဲ.အဲ့ဒီဖာသည်မတွေက ဈေးကောင်းရချင်လို့ ဝတ်ကြတာဟေ့
4 May 2013 01:38
နိုင်ငံခြားကိုထွက်တဲ့မိန်းမတွေ ဖာသေမတွေပဲ ဖင်ပဲခံကြ
4 May 2013 01:39
အမေစုလည်းကုလားမိန်းမဖြစ်တောမယ် ပါးစပ်ကဘုရားဘုရား လုပ်တာက ကုလား
5 May 2013 14:27
တကယ်တော့ မြန်မာမလေးတွေကသနားစရာပါ။ ကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာအလုပ်ကောင်းကောင်းမရှိလို့သွားရတာ။ဒို့ဗမာတွေဘယ်သူကိုမှလည်းယုံကြည်အားကိုးလို့မရဘူးလေ ဒေါစုကြည်နဲ့မှကုလားကျွန်ဖြစ်တော့မယ်။ ဒီထက်ဆယ်ဆစည်းလုံးဖို့လိုတယ်ဗျ။လူမျိုးခြားနဲ့ယူတဲ့မိန်းမတိုင်းကိုမိန်းမယုတ်လို့သတ်မှတ်သင့်တယ်းအမျိုး ဘာသာ သာသနာ ကိုဖျတ်မယ့်ဟာတွေ
ဟုတ်တယ် မင်းမြင်ချင်တွေ မြင်ပြီရေး မနေဲ့ လေ့လာပြီးမှရေး
သူ များ တွေ ကို ဝေဖန်မနေနဲ့ ကိုယ့်တာကို လုံအောင် ထိန်းပါ မြန်မာလူမျိုး တွေဘဲ မရိုင်းပါနဲ့ ဆဲမှသိတာလူမဟုတ်ဘူး
30 May 2013 00:14
ok,မြန်မာလူ မျိုးတွေဘဲ ဆဲဆိုပြောတာ မကောင်းပါဘူး ကိုယ့်တာကို လုံအောင်ထိန်းပါ
မင်းတို့ရေး ချင်တာရေး အမေ့ ကိုတော့မထိနဲ့ကွာ ပျက်ချင်တဲ့လူက ၁။ကိုယ့်ကို ဖျက်မဲ့သူရှိရမယ် ၂။ကိုယ်ကိုတိုင် ပျက်နိူင်တဲ့အခြေအနေမျိုး ၃။(၁ နဲ့ ၂ ) အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကို စုစည်ပေးအချိန် အခါပဲ ငါပြောတာ မှားတယ်ထင် ထောင်ထဲ ဖင်ခံတဲ့ ယော့ကြားတွေ အများကြီးပဲ Anonymous
1 June 2013 00:58
အမေ့ ကိုတော့ မထိနဲ့ အခြေအနေ နဲ့ အချိန်အခါ ကြောင့်ပါ ထောင်ထဲတွေမှာ ဟင်းစားချင်လို့ ဖင်ခံတဲ့ အထီးတွေ အများကြီးပဲ့ ညီလေးရေ
14 June 2013 00:07